Nolosha Avatar - Jacaylka Metaverse: Play, Download, Lacag hel | Macluumaad Dhameystiran! - Metaverse
Nolosha Avatar – Jacaylka Metaverse: Play, Download, Lacag Kasbashada | Macluumaad Dhameystiran!
Ma u baahan tahay xoogaa caawimo ah kicinta wada hadal lala yeesho nin dhallinyaro ah? Dhib ma ku qabtaa u dhawaanshaha dumarka? Ma jirto meel ka fiican oo lagula kulmo dad cusub marka loo eego dhacdo kaligeed.
Ku soo dhawoow Avatar Life, ciyaar Android bilaash ah oo aad qof kasta kula xiriiri karto meel kasta!
Dunida Virtual Avatar Life waa isku dhafka sheeko iyo ciyaar. Adiga ayay ku xiran tahay! Samee avatar adiga kuu gaar ah oo noqo qofkaad rabto! Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah in aad habayso jinsigaaga avatar-ka iyo sidoo kale muuqaalkiisa iyo qaabkiisa.
Baro midba midka kale, haasaawe, oo laga yaabee xitaa jacayl!
Si looga fogaado shakiga, ciyaartayagu ma oggola galmoodka dhabta ah ama kuma jiraan wax muuqaal ah oo qaawan. Dadka da'doodu ka yar tahay 13 sano waa in aysan ciyaarin ciyaartayada, taas oo loogu talagalay maaweelo iyaga u gaar ah.
NAQAYSO AVATAR shay GAAR AH
Ka dooro in ka badan 800 oo maqaal oo dhar ah si aad u muujiso shaqsinimadaada.
Timo kala duwan, qaababka indhaha iyo dibnaha ayaa diyaar kuu ah inaad tijaabiso.
Waxaad bedeli kartaa muuqaalkaaga wakhti kasta si aad ugu habboonaato niyaddaada!
NAFTAADA GURI RIYO U ABUUR
Ka dooro in ka badan 1500 oo shay oo alaabta guryaha ah.
U fiirso qaar ka mid ah fikradaha naqshadeynta ee horay loo sameeyay.
Ku soo celi tamarta avatarkaaga dhowr daqiiqo gudahood adiga oo gelaya qolka VIP-da.
Noqo xarunta dareenka
Nolosha Avatar - Jacaylka Metaverse
Ku martiqaad asxaabtaada nolosha dhabta ah inay kugu soo biiraan Avatar Life.
Sii oo hel hadiyado. Baashaal, haasaawe, oo naftaada ku raaxayso.
La saaxiib, lammaanaha ugu fiican, lammaane, ama xitaa la xafiiltama qof kasta oo aad la kulanto.
Tartanka magaca Avatar Life's kan ugu iftiimaya ayaa si fiican u bixin doona.
NOLOSHA Khibrad buuxda leh
Naftaada ku raaxayso, ku wareeg agagaarka beerta, booqo goob lagu caweeyo, kafateeri, ama salon.
Raadi xirfad ku habboon danahaaga oo hel abaalmarinta.
Ku tuur xaflad duurjoogta ah gurigaaga, u adeeg cabitaan martidaada, oo u ogolow wakhtiyada wanaagsan inay soo rogaan.
Ha ka waaban inaad keeg dhan ku tuurto wejiga qof!
Avatar's Life - Jacaylka Metaverse waa app bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo laga heli karo qaybta abka ee ciyaaraha iyo madadaalada.
101XP LIMITED waa ganacsiga mas'uulka ka ah horumarinta Avatar Life - Love Metaverse. Nooca ugu dambeeyay ee uu sameeyay horumariyuhu waa 3.41.8.
Si aad u bilowdo nidaamka rakibaadda Avatar Life - Love Metaverse ee aaladdaada Android, si fudud u riix batoonka Continue To App ee kore. Codsiga waxa uu ku taxnaa mareegahayaga ilaa 2012-02-07 waxaana la soo dejiyay 30 jeer.
In kasta oo aanu hore u xaqiijinay in isku xidhka soo dejintu uu badbaado yahay, waxaanu kugula talinaynaa inaad ku sawirto abka la soo dejiyay software-ka antivirus si aad u ilaaliso. Haddii software-ka ka-hortaggaagu u aqoonsado Avatar Life - Love Metaverse sida malware, ama haddii isku xirka soo dejinta ee com.xp101.ava rus aanu hadda shaqaynayn, fadlan nagu soo ogeysii bogga xidhiidhka ee mareegahayaga.
Ku rakibida Avatar Life - Jacaylka Metaverse ee Android:
Boggayaga, dhagsii Continue To Appka. Tani waxay ku geyneysaa Google Play.
Marka Avatar Life - Love Metaverse uu ka soo muuqdo dukaanka Google Play ee Android, waad awoodi kartaa
Bilaw soo dejinta iyo rakibidda. Waxay ku taal hoos baararka raadinta iyo midig ee astaanta abka, taabo Ku rakib.
Daaqada pop-up ka kooban Avatar Life - Love Metaverse ogolaanshaha ayaa soo bixi doona. Aqbal sii wad
Metastrike: Metaverse Qofka Kowaad ee Toogashada oo ku salaysan Blockchain
Rec Room Metaverse: 'way ka badan tahay kaliya ciyaar'
Avatar Life - Love Metaverse app wuxuu bilaabi doonaa soo dejinta. Ka dib markii la soo dejintu dhammaato, rakibaadda ayaa bilaaban doonta waxaana lagugu soo sheegi doonaa marka ay dhammaato.
Ogow waxa xiisa leh oo ku saabsan Xiliga Taagan ee Ninka Ugu Dambeeyay 9
TV -ga wadhafka ayaa loo adeegsan karaa aalado badan
filimka ugu fiican ee tooska ah ee tooska ah ee bilaashka ah
123 filim com filimada soo dejinta bilaashka ah
goobaha ugu sarreeya si aad u daawato bandhigyada tv -ga bilaashka ah
goobta ugu wanaagsan ee telefishanka bilaashka ah
google guriga soo dejiso daaqadaha 10